I-Middle East Airlines iba yi-Airbus Skywise Health Monitoring umthengi omtsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Middle East Airlines iba yi-Airbus Skywise Health Monitoring umthengi omtsha
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseLebhanon zokuPhula • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Middle East Airlines iba yi-Airbus Skywise Health Monitoring umthengi omtsha.
Isebenzisa iqonga ledatha ye-Skywise aviation data, i-SHM iqokelela ize izibeke kwindawo enye izilumkiso, iziphumo ze-flight-deck, imiyalezo yolondolozo njl.
I-Middle East Airlines iya kusebenzisa isisombululo kuyo yonke inqanawa yayo.
Isikhululo seenqwelomoya esise-Beirut sisebenza kuzo zonke iinqwelo ze-Airbus eziquka i-A320 kunye ne-A330 yenqwelo moya yoSapho.
I-Airbus 'SHM igcina ixesha leenqwelo-moya kunye neendleko ezinxulumene nokugcinwa okungacwangciswanga.
I-Middle East Airlines (MEA) utyikitye isivumelwano sokujoyina uluntu lwabasebenzisi beSkywise Health Monitoring (SHM).
Ukuma ixesha elide Airbus umthengi uya kuba yinkampani yeenqwelomoya yama-50 esebenzisa esi sixhobo sivelisayo ukwenza ngcono ulondolozo lweenqwelomoya zayo. I-SHM iya kuxhasa ugcino lwenqwelomoya kunye namaqela obunjineli ngokuvumela ulawulo lwexesha lokwenyani lweziganeko zenqwelomoya kunye nokusombulula ingxaki.
Isebenzisa iqonga ledatha ye-Skywise aviation data, i-SHM iqokelela ize izibeke kwindawo enye izilumkiso, iziphumo ze-flight-deck, imiyalezo yolondolozo njl. Ikwaqaqambisa iimpembelelo zokusebenza, ibonelela ngembali yogcino lwenkqubo (ukusuka kwi-logbook kunye nolwazi lwe-MIS oluqokelelwe nge-Skywise Core kwaye lugcinwe kwichibi ledatha), ukuvumela ukulandelela okusebenzayo kwezilumkiso. Ukongeza, inokunceda iinqwelomoya zilindele kwaye zibonelele ngezixhobo kunye neenxalenye 'ukuba zifumaneke kufutshane nenqwelomoya.
MEA iyakusebenzisa isisombululo senqwelo yayo yonke. Inqwelomoya esekwe eBeirut isebenza yonke-Airbus inqwelo moya equka i-A320 kunye ne-A330 yoSapho.
I-Airbus 'SHM igcina ixesha leenqwelo-moya kunye neendleko ezinxulumene nokugcinwa okungacwangciswanga. I-SHM iphinda iDibane ne-Skywise Predictive Maintenance (SPM) kunye ne-Skywise Reliability (SR) ukubonelela ngamava adibeneyo omsebenzisi. Ukongezelela, kukulungele ukuhlanganisa amandla anamandla e-Flight Operations kwibhodi entsha kunye ne- Maintenance Exchanger ("FOMAX") yomzila wedatha - enokuthi ibambe kwaye irekhode ngaphezu kwe-24,000 iiparamitha ze-aircraft yexesha langempela ukwenzela uhlalutyo olulandelayo.
USmith Oliver uthi:
NgoDisemba 9, 2021 kwi-07: 10
Ukusebenzisa idatha yexesha langempela, iingxelo zedesika yoncedo kunye neemetrics zikuvumela ukuba ulinganise indlela abathengi abavakalelwa ngayo malunga nedesika yakho yoncedo. Ingxelo ivelisa iingxelo ezilungiselelweyo ukuze zikuncede ulinganise kwaye uphucule ukusebenza kakuhle. Freshworks Consultant kwa https://www.techloyce.com/freshworks-integrations/ inokukunceda ukuba wenze ngokwezifiso ukuhamba kwakho komsebenzi, i-portal yomthengi, kunye neendima ze-arhente ukuhlangabezana neemfuno ezithile zenkampani yakho.